KW-200 - Knee Walker - Knee Scooter - Crutch Chinotsiva - Knee Caddy
View ngoro "R-4800 - 20 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
Iyo Knee Walker
Iyo yemabvi sikuta inopa yakawedzera nyaradzo uye kurerukirwa kwekufamba kune varwere vasingakwanise kuisa huremu patsoka kana pamagumbo asi vachida kuramba vachishanda. Iine mavhiri aro mana mahombe uye paduru yemabvi chikuva, iye anofamba mabvi akakwana kushandiswa kwemukati nekunze.
Mufambi wedu wemabvi ishamwari yakanaka kune vanhu avo mukukuvara kwetsoka, kukona kwetsoka kana kudimburwa kwepasi. Uyu anofamba mabvi anogona kuvabatsira kuti vafambe zviri nyore. Kupisa kwechigaro uye mubato zvinogona kugadziridzwa kuti zvisangane zvakasiyana kudiwa. Vashandisi vanogona kuitasva mukati nekunze. Zviri nyore kupeta kuti zvive nyore kutakura. Izvo zvinhu zvinopupurirwa neDFA uye akasimba mavhiri zvinopa yakachengeteka uye yakagadzikana kukwira ruzivo.
Shamwari yakanaka kune vanhu vari mukukuvara kwetsoka, mabhureni emakumbo kana kuderera kwekumusoro kwekumusoro
5 kukwirira kwemakusheni uye 9 pakakwirira mubato kugadzirisa zvinogutsa zvakasiyana zvinodiwa
4 mavhiri akasimba ekufamba nyore
Inogona kupetwa zviri nyore pasina maturusi ekuti ufambe nyore
Yakagadzirirwa chigaro chekugara kana chemabvi
Vashandisi vanogona kukwira mukati nekunze
Isiri-slip mubato une bhureki remaoko
KW-200 - 23.5 lbs huwandu
SKU: vhiki 200 Category: Vanotenderera Tags: scooter yemabvi, anofamba nemabvi
Iyo yemabvi sikuta inopa yakawedzera nyaradzo uye nyore kwe kufamba kuvarwere vasingakwanise kuisa huremu patsoka kana pamagunduru asi vachida kuramba vachishanda. Nemavhiri aro mana akakura uye padenga yemapuratifomu, ibvi caddy rakanakira kushandiswa kwemukati nekunze.
Karman KW-200, ndiye akanakisa ibvi caddy / ibvi Walker kunze kumusika nhasi. Iyo dhizaini uye dhizaini inokurudzira nyaradzo uye kugadzikana. Kunyangwe zvaunoda zviri zvekungotenderera mutaundi kana mumba, yedu KW-200 modhi inogona kusangana nekupfuura yako yekushandisa michina.
Ndicho chivimbo chedu kuKarman kuti hauzonzwa seichi chigadzirwa chekurapa kana iwe waona dhizaini zvakadzama ne unhu yakavakwa kubva pasi kumusoro. Ichi chizvarwa chedu chechipiri Gumbo Caddy uye zvinongova zvakanakisa pamusika nhasi. Enzanisa kutendeuka radius, kugadzikana, uye maficha akapihwa uye iwe unosarudza zvirokwazvo Karman ibvi Walker nhasi!
Deluxe Loop Brake yekuwedzera kuchengetedzeka uye kutonga
Chishandiso-chisina mubato kureba chinja kubva 31 ″ -41 ″
Chishandiso-chisina chigaro kukwirira kugadziridza kubva 16 ″ -22 ″
Kukura kwepad: 15 ″ x 7 ″
Inorema chete 23.5 lbs.
Inowanikwa muBlack, White, uye Burgundy
8, Flat-yemahara casters yekuwedzera kugadzikana
Kureba Kwese: 31 ″
Hupamhi hwese: 16 1/2 ″
Chishandiso-chisina kupeta pasi anobata
Zviri nyore kutakura
Kurema Chikamu: 350 lbs.
18 × 17 × 34 mukati
DZOKUDZIDZA ZVIDimbu SCHEMATIC